China zuru ezu Akpaaka Flat Mask Ime Machine 1 + 2 ndị na-eweta na ndị na-eweta ahịa | Nkà na ụzụ Shouzheng
Ahịrị ahụ na-eji akwa a kaghị akpụ akpụ iji mepụta ihu nkpuchi ihu ahụ na akpaaka ịgbakwunye earloop na ihu mpe ihu ngwa ngwa, ọ bụ akụrụngwa kachasị mma iji mee nkpuchi ihu. anyị nwere ike ịnye gị igwe ihe nkpuchi ihu maka ime ụdị dị iche iche na ụdị ihu dị iche iche.
1. Mpempe igwe dị elu, servo moto, ezigbo nguzosi ike, ọnụ ala dara ada na oke arụpụtaghị ihe.
2. Nchọpụta akpaaka na akụrụngwa mkpu, belata ụgwọ mmezi, na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma na nchekwa.
3. Igwe ọkụ dị elu, njikwa akpaka nke akụrụngwa akụrụngwa, arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, ọrụ na-aga n'ihu ogologo oge na ezigbo kwụsie ike.
4. Na-emetụ ihe osise, ime ihe dị mfe iji mụta ihe, yana ichekwa ụgwọ ọrụ ọrụ nke ọma.
5. Otu igwe na-anya igwe ntị abụọ, na-akpụ masks 2 n'otu oge, arụmọrụ dị elu.
6. Udiri a dum nwere ike itinye aka na imeputa n’ime ubochi 1 mgbe ejikere ime obodo nke oma.
7. Na-ebugharị ngwaahịa a haziri nke ọma, enweghị ngwaahịa na-emepụta ihe mkpofu mgbe ịmalitegharị igwe, mkpọtụ dị ala mgbe igwe na-agba ọsọ.
Nka nka na ụzụ:
Aha: Igwe nkpuchi 1 + 2 zuru oke
Ike ọrụ: 220V, AC ± 5%, 50HZ
Ike ngwa ọrụ niile: Ihe dị ka 8.8KW
Ikuku agbakọrọ agbak: 0,5 ~ 0.8MPa, mgbe nhichachaa na nhicha ya, ọnụego mmiri ahụ ruru 400L / Min
Okpomoku: 0 ~ 40 ℃
Iru mmiri: 5 ~ 38% HR
Ọ nweghị gas na-ere ọkụ, gas na-ere ọkụ
Ulo akwukwo na enweghi ura (erughi ihe ruru 100,000)
Nrụpụta arụ: 90 ~ 110 iberibe / nkeji
Akụkụ akụrụngwa: L * W * H = 6800mm * 4800mm * 1990mm
Ngwa pneumatic: SMC ma ọ bụ AIRTAC, wdg.
A na-ejikarị ya maka ịchebe akpaka, ịwa ahụ na ájá, wdg.
Igwe na-eme Nka Okwu Mmalite:
Eji igwe ihe mkpuchi akpukpo igwe a mee ihe maka akpukpo ahihia. Usoro ihe omume PLC na-achịkwa servo na oge a na-ahụ maka ịgbado ọkụ mgbe niile iji rụọ ọrụ ahụ site na njikọ → ịgbado ọkụ → punching → ntụpọ ịgbado ọkụ ntị na-emecha n'otu oge, usoro mmepụta niile na-arụ ọrụ nke ọma. Njirimara ngwaahịa nke igwe ihe nkpuchi Igwe na-eme ihe nkpuchi bụ usoro nke imepụta ụdị ihe dị iche iche nwere arụmọrụ mgbe niile site na usoro dị ka ịkpụzi mpịkọ ọkụ, ịgbado ọkụ ultrasonic, mwepụ scrap, na ịgbado ọkụ nke imi imi imi.
Esemokwu eserese ：
Kedu ihe mere ịhọrọ igwe anyị?
Ichekwa Ego A Ga-ewepu Nwepu Anya Nkpuchi Mmeputa Ngosiputa Elu
1. Nnukwu nkwụsi ike na ọkwa ọdịda ada ada, ntinye dị mfe.
2. Ndi otu ahia ahia haziri ihe kariri afo 8 nke ahia ahia mba ofesi.
3. Nke awa 24 n'ịntanetị iji nyere gị aka idozi ajụjụ niile.
4.The ọsọ ọsọ nke masks bụ 110-120 iberibe / min na karịa, yana ngafe dị elu karịa 98%, nke dị elu karịa ngwaahịa ndị yiri ya.
5. Ọsọ na-agbanwe agbanwe, ogo ngwaahịa kwụsiri ike, dị mfe iji rụọ ọrụ, arụmọrụ dị elu, mbadamba 80 kwa nkeji.
6. Aluminium alloy etiti, njikwa ihuenyo mmetụ aka, oge a na-eme ya, ngụkọta oge, nhapụta nke ụbọchị, setịpụrụ ọnụ ọgụgụ nke mkpu akpaka na nkwụsị, ụdị isi ihe mmegharị dijitalụ a.
7. motorgbọ ahụ na-agbado ebumpụta ụwa na-adọ agba atọ, mgbatị ọsọ ọsọ mgbatị ụkwụ, ọrụ mkpọtụ dị ala.
8. Ntucha mkpuchi bụ ihe niile site na ịgbado ọkụ ultrasonic, arụmọrụ kachasị elu, ihe nkiri dị elu.
Nke gara aga: Ngwa nkpuchi 1 + 1 zuru oke
Osote: Ihe Nleta Nke Kn95
3 Ply Mask Ime Machine
Akpụkpọaka Akpụaka akpaaka
Disposable Face Mask Ime Machine
Ntugharị Ntughari Ihu
Ihe Nleta Nkpuchi Kn95
Igwe na-eme ihe mkpuchi na akpaaka akpaaka
Semi Automatic Mask Ime Machine
Mpempe Ntugharị Ime Ahụ